Proxy vs VPN: 5 Farqiga Muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Proxy vs VPN: 5 Farqiga Muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato
Proxy vs VPN: 5 Farqiga Muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato
Maalmahan, isticmaaleyaal badan oo internetka ah ayaa isbarbar dhigaya wakiil vs VPN, iyaga oo la yaaban waxa ay tahay in ay isticmaalaan marka ay wax baadhayaan si ay isu difaacaan.
Sannadka 2020, 84% macaamiishu waxay sheegeen inay danaynayaan sirtooda iyo xogtooda, 80%-kuna waxay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan si ay u ilaaliyaan.
Shabakadaha gaarka ah ee Virtual (VPNs) iyo wakiillada ayaa ah xalka suurtagalka ah sababtoo ah waxay ku daraan lakab dheeraad ah oo u dhexeeya browserka iyo shirkad kasta ama dawlad kasta oo raadraaca xogta.
Laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya wakiil vs VPN? Doorkee ayaa ugu fiican haddii aad rabto inaad hagaajiso qarsoodigaaga iyo badbaadada internetka?
Maqaalkan, waxaan ka jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaaga waxaanan muujin doonaa farqiga muhiimka ah ee u dhexeeya labada.
Waa maxay Shabakadda Gaarka loo leeyahay ee Virtual (VPN)?
Shabakad gaar loo leeyahay, ama VPN, waa shabakad gaar ah oo siraysa xog kasta oo laga soo diro ama laga helo intarneedka. Waxay kaa caawinaysaa inaad si ammaan ah oo qarsoodi ah u gasho shabakadaha oo aad isticmaasho barnaamijyadaada iyo abka, iyada oo aan loo eegin shabakada aad isticmaalayso.
Ka fakar in uu yahay warqaade sugan, oo ka qaadaya xogta mareegaha mareegaha oo si ammaan ah ugu gudbinaya kombiyuutarkaaga. Sida baabuur gaashaaman uu lacag caddaan ah uga soo qaadi lahaa ATM-ka.
Waxa kale oo ay qarinaysaa IP gaaga (halkan waa sida loo hubiyo IP-gaga), waxayna kuu ogolaanaysaa inaad beddesho goobtaada si aad u hesho macluumaad xaddidan juqraafiyeed. Sida haddii bandhiga aad jeceshahay aan laga heli karin Netflix gudaha wadanka aad booqanayso.
Waxa kale oo aad meel fog ka geli kartaa nidaamka faylka shirkaddaada adigoo wata "ciwaanka IP-ga ee xafiiska."
VPN-ku wuxuu ku shaqeeyaa heerka nidaamka hawlgalka oo wuxuu sir ah u dhigaa dhammaan taraafikada intarneedka soo galaya iyo kuwa baxaya.
Sidee VPN u shaqeeyaa?
Sida VPN u shaqeeyo (Isha sawirka: yellowstonecomputing.com)
Markaad la xiriirto server-ka VPN, macmiilka VPN wuxuu isticmaalaa sirta xogta, kaas oo meel fog ka galaya mareegaha ama xogta aad maskaxda ku hayso. Waxaad helaysaa dhexdhexaadiye labada dhinac ah. Macmiilku waxa uu ka qariyaa su'aalahaaga router-kaaga iyo bixiyaha adeegga interneedka (ISP), halka uu VPN server-ku ka qarinayo aqoonsigaga bogga ama adeegga aad isticmaalayso.
Waxay ka dhigaysaa farqi weyn xagga amniga marka aad isticmaaleyso nooc kasta oo shabakad WiFi dadweyne ah. Wax iibsiga onlaynka ah, bangiyada, ama u dirida iimaylada shaqada ee shabakad furan ayaa aad uga ammaan badan VPN.
Maaddaama VPN-ku uu qarinayo xidhiidhkaaga, jabsiga iman kara ma “dhejin karaan” gudbinta si ay u xadaan xogta nugul, sida lambarka koontada, ama ka sii daran, eraygaaga sirta ah.
Waxa kale oo ay ka hortagtaa ISP-gaaga ama cidda aad u shaqayso inay basaasaan taraafikadaada iyo waxa aad internetka ka samaynayso adoo la socda taraafikada router.
Haddii shirkaddaadu isticmaasho router ku shaqeeya VPN, waxaad isticmaali kartaa VPN si aad meel fog uga xirto shabakadaada xafiiska oo aad u hesho faylasha xafiiska, CRM, ama software kale ee wadada.
Waa Maxay Wakiilka Wakiilka?
Adeegaha wakiilku caadi ahaan waa adeeg dadweyne oo fog oo laga dhex galo abka webka ama barnaamijka desktop-ka kaas oo gala boggaga shabakadda adiga oo ku hadlaya magacaaga.
Adeegaha wakiilku waxa uu ka shaqeeyaa heerka codsiga, isaga oo u shaqaynaya sidii wakiil hal app ah (sida biraawsarkaaga) markiiba.
Qaar badan oo wakiil ka ah server ma taageeraan wareejinta xogta HTTPS ee sugan, oo, asal ahaan, ma aha ammaan.
Sidee u shaqeeyaa Server-ka Wakiilku?
Marka dadka intooda badan ay isticmaalaan ereyga proxy server, waxay ula jeedaan HTTP wakiillada.
Adeegayaashan wakiiladu waa mareegaha internetka ka gala bogga internetka ka dibna xogta u sii gudbiya browserkaaga.
Sida server-ka wakiilku u shaqeeyo (Isha sawirka: seobility.net)
Waxaad u isticmaali kartaa kuwan si aad u gasho boggaga internetka ee xaddidan juqraafiyeed iyo bogaga biraawsarkaaga.
Si ka duwan VPN-ka, xidhiidhkaaga wakiil maahan mid qarsoodi ah. Waxay u shaqeysaa sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya kombuyuutarkaaga iyo serverka ugu dambeeya.
Natiijo ahaan, wakiil HTTP ayaa ka qarin doona aqoonsigaaga mareegaha laakiin ma sugi doono xog xasaasi ah.
Wakiilka SOCKS5 wuxuu u shaqeeyaa sida HTTP ama wakiillada shabakadda, laakiin waxaad ku xidhi kartaa codsiyada kale, ma aha oo kaliya biraawsarkaaga.
Wakiilka SOCKS5 ayaa xaddidaya dhammaan wareejinta xogta lakabka 5-aad, isagoo si wax ku ool ah u xannibaya isku dayga tunnel-ka ama iskaanka nidaamkaaga iyadoo la adeegsanayo aaladaha jabsiga ee caadiga ah.
Maadaama aad ku dejinayso heerka codsiga, barnaamijka laftiisa waa inuu taageeraa adeegsiga wakiilnimada. Ma maamusho dhammaan taraafikada soo galaya iyo kuwa baxaya sida VPN uu u sameeyo. Laakin waxaad u isticmaali kartaa wadaagga fayl-wadaaga, iimaylka, durdurrada, iyo in ka badan.
Wakiil hufan waa wakiil lagu dejiyay shabakad si loo xakameeyo oo loola socdo taraafikada shabakadda. Waa daah-furan sababtoo ah inta badan isticmaalayaasha ma ogaan doonaan inay halkaas ku jirto (illaa ay ka xannibayso inay galaan bogga).
Dugsiyada, xafiisyada, iyo xitaa kafateeriyada ayaa u isticmaala kuwan si ay u xaddidaan gelitaanka mareegaha qaarkood, sida warbaahinta bulshada ama Netflix. Ganacsiyadu waxay isticmaali karaan mid si ay kuugu ilaaliyaan shaqadaada ama aad u hubiso inaadan isticmaalin xajmiyeed aad u badan.
Proxy vs VPN – waa maxay farqiga u dhexeeya, iyo tan ugu muhiimsan, kee baa u fiican sirta iyo badbaadada?🔐 Guji si aad u aragto burburka buuxa ee labadan xal 🔍Riix halkan Tweet
5 Farqiga Muhiimka ah ee udhaxeya Wakiil iyo VPN
Marka la eego qeexitaannada farsamada oo keliya, waxay noqon kartaa caqabad ku celcelis isticmaale inuu u sheego VPN marka laga reebo wakiil. Si lagaaga caawiyo inaad fahamto sida VPN uu uga duwan yahay server-ka wakiilnimada, waxaan iftiiminay kala duwanaanshaha ugu weyn marka la barbar dhigo VPN-yada wakiillada ku saabsan amniga, sirta, cookies, qiimaha, iyo xawaaraha.
1. Proxy vs VPN: Amniga
93% jebinta xogta waa la iska ilaalin karay iyada oo loo marayo dadaallada amniga ee aasaasiga ah. Qofka gaarka ah, taasi badanaa waxay la macno tahay qaadashada taxaddar dheeraad ah marka aad internetka ka baadhayso.
Gaar ahaan marka laga isticmaalayo internetka shabakada dadweynaha. Laakin doorkee ayaa ah doorashada ugu fiican marka ay timaado hagaajinta amnigaaga?
Aan ku bilowno inaan si dhow u eegno server-yada wakiillada.
Wakiiladu ma badbaadsan yihiin?
Jawaabta oo kooban waa: malaha maya. Gaar ahaan haddii aad door bidayso wakiillada wakiillada sababtoo ah waxay u muuqdaan inay xor yihiin, oo ka soo horjeeda VPN-yada.
Dadwaynaha, server-yada wakiillada ee aan qarsoodiga ahayn ayaa aqoonsigaaga ka qariya shabakada aad booqanayso. Laakiin waxba ma sameeyaan si ay u sireeyaan xidhiidhkaaga server-ka wakiil laftiisa.
Adigoo isticmaalaya server-ka wakiil ka ah dadweynaha, waxaad halis ugu jirtaa inaad ku dhamaato xiriir aan ammaan ahayn marka loo eego kaliya inaad si toos ah ugu xidhid server-ka shabakadda biraawsarkaaga.
Wanaagsan vs xun wakiilo
Adeegayaasha wakiillada ee lacag bixinta leh ee leh isku xirka HTTPS iyo ilaalinta erayga sirta ah waa badiyaa badbaado. Laakin wali way xadidan yihiin marka la barbar dhigo dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah ee aad ka hesho VPN-fasalka xirfadaysan.
Marka xigta, aan si dhow u eegno VPN-yada iyo sida ay u saameeyaan amnigaaga.
VPN-yadu ma badbaadsan yihiin?
Haa, inta badan VPN-yada ganacsiga waa badbaado in la isticmaalo. VPN waxa ay ku shubtaa xogta server-ka-dhamaadka ka dibna waxay siraysaa xogta ka hor inta aanad u dirin macmiilka kombiyuutarkaaga.
Keliya ka dib marka xogta loo diro macmiilka ayay kala saartaa xogta si loogu isticmaalo barnaamijyada kale. Markaa aqoonsigaga kaliya kama qarsoona degelka ama adeegga aad booqato, ISP-gaaga, ama xataa shabakadu ma garanayso xogta aad ku shubayso midkood.
Waxa kaliya ee ay arki karaan waa inaad ka soo shubanayso xogta sir ah VPN. Waxay xogtaada ka ilaalisaa tuugta xaasidnimada leh ee ku jira shabakad furan, iyo sidoo kale indhaha dawladda ama cidda aad u shaqayso.
Waxay sidoo kale ka ilaalin doontaa cinwaankaaga IP-ga in la shaaciyo, ka ilaalinta kombuyuutarkaaga weerarrada DDoS iyo weerarrada kale ee xoogga ah.
Dhammaan ilaalintani waxay u ekaan kartaa geeddi-socod dheer, laakiin dhammaan waxay ku dhacaan microse seconds. Si weyn uma saameynayso khibradaada wax raadinta. Xitaa waxaad ku daadi kartaa filimada HD adiga oo aan wax daahin ah lahayn ama waxaad ciyaari kartaa ciyaaraha khadka tooska ah iyadoon arrimo daahsoon.
Digniin kaliya ayaa ah in adeegga VPN uu yahay mid la isku halleyn karo oo keliya sida bixiyeheeda. Markaa waa inaad samaysaa dadaalkaaga markaad dooranayso VPN.
Xusuusnow inaad si buuxda u siinayso shirkad marin u helka taraafikadaada interneedka. Dooro bixiye VPN oo leh sumcad heersare ah iyo dhaqamada asturnaanta wanaagsan.
2. Proxy vs VPN: Qarsoodi
74% dadka Mareykanka ah ayaa xaddiday dhaq-dhaqaaqooda internetka sababo la xiriira arrimaha gaarka ah.
VPN-yada gudaha lagu rakibay waxay bixiyaan sir dhammaystiran oo xogtaada ah laga bilaabo marka uu ka baxo kombayutarkaaga ilaa uu u socdo. Taas macnaheedu waa in ay aad ugu adag tahay dadka inay basaasaan xogtaada.
Xitaa haddii aad ku jirto shabakad WIFI furan, sirtu waxay ka ilaalinaysaa xogtaada inay dhexda u galaan tuugta xaasidnimada leh.
Oo maadaama VPN uu isticmaalo sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka, ISP kaaga, routerkaaga, loo shaqeeyaha, ama dawladda sidoo kale ma heli karaan xogtaada.
Taasi waa qayb ka mid ah sababta ay dawladda Shiinaha isku dayayso inay xaddiddo gelitaanka dadweynaha ee VPN-yada. Sababtoo ah marka xitaa ISP-ga aysan ku dhufan karin taraafikada, ma jirto si loo xakameeyo haddii aad gelayso mareegaha la xiray iyo haddii kale.
VPN-yadu waxay sidoo kale ka qarin doonaan cinwaankaaga IP-ga iyo goobta aad booqatay, taas oo adkeynaysa in lagu aqoonsado.
Adeegayaasha wakiillada waxay u shaqeeyaan sidii dhex-dhexaadinta waxayna ka qariyaan ciwaanka IP-gaaga seerfarka shabakadda ee aad booqato.
Xataa VPN ama wakiil, waxaad weli u nuglayn doontaa faraha qalabka iyo farsamooyinka kale ee ay adeegsadaan xayaysiisyada xariifnimada leh si ay u muujiyaan xayeysiisyada "ku habboon".
Laakin adiga oo qarinaya ciwaanka IP-gaga, waxa aad ugu yaraan adkaynaysaa shirkadaha in ay ku xidhmaan dhibcaha.
3. Proxy vs VPN: Kukiyada
Sharciyada (sida GDPR iyo CCPA) iyo diirada la saaray sirta interneedka, macaamiil badan ayaa ka walaacsan sida goobaha iyo xayeysiiyayaashu u isticmaalaan cookies si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda.
U hoggaansanaanta GDPR waa mid ka mid ah mawduucyada kulul ee cusub ee adduunka ganacsiga EU. Iyo sabab wanaagsan. Sharcigan cusub dartiis, ku dhawaad ​​degel kasta oo kula socda cookies waa inuu ku weydiiyaa ogolaanshahaaga.
Waxay u badan tahay inaad aragtay soo-jeedintan oo kale boqollaal jeer hadda.
Oo waa tan waxa ku saabsan cookies, waxay ku kaydsan yihiin oo ku kaydsan yihiin darawalka adag ee kombiyuutarkaaga. Kukiyada waxaa lagu soo dejisan doonaa kombiyuutarkaaga iyada oo loo marayo server-ka wakiil ama VPN.
Laakin marka la haysto VPN, buskudku waxa uu ku khaldami doonaa ciwaanka IP-ga ee VPN adiga, kaas oo bixin doona heer ka ilaalinaya faraha iyo farsamooyinka kale ee raadraaca dhijitaalka ah.
Adeegaha wakiilku waxa kale oo uu ku khiyaami doonaa shabakada si uu u kaydiyo buskud leh ciwaanka IP kale.
Markaa marka aad bilowdo isticmaalka VPN ama server proxy, waa in aad nadiifisaa dhammaan cookies-yada ku jira kumbuyuutarkaaga.
Haddaysan ahayn, cookies-ka jira ayaa laga yaabaa inay farageliyaan lakabka gaarka ah ee lagu daray. Goobtu waxay ku xidhi doontaa meeshaagii asalka ahaa iyo cinwaanka IP-ga oo waxay u isticmaali doontaa inay ka caawiso faraha qalabkaaga.
4. Wakiil vs VPN: Qiimaha
Waxaan eegi doonaa dhowr xal oo ka sii hooseeya barta blog-ka, laakiin hadda, waa inaad ogaataa in inta badan wakiillada la heli karo ay yihiin dadweyne iyo bilaash, halka adeegyada VPN ay caadi ahaan ku kacaan inta u dhaxaysa $5 iyo $12 bishii.
Haddii aad rabto inaad si badbaado leh u isticmaasho adeegaha wakiillada, waxaad u baahan doontaa inaad sidoo kale adeegsato adeeg qaali ah oo la isku halayn karo. Bixiyaha wakiillada ee Premium SOCKS5 IPVanish qiimihiisu waa $5 bishii, beddelka kalena waa isku qiimo.
Markaa haddii aad nabadgelyadu dhab ka tahay, VPN wali waxay ku siinaysaa lacagta ugu fiican.
5. Proxy vs VPN: Xawaaraha isku xidhka
Farqiga kale ee muhiimka ah ee u dhexeeya wakiil iyo VPN waa xawaaraha isku xirka.
Adeegga wakiil ka ah dadweynaha, waxaa laga yaabaa inaad ku dhibtoonaato inaad xitaa hesho hal megabit ilbiriqsikii, halka VPN-yada qaar ay bixiyaan xawaare dhan 50 Mbps ama ka sareeya.
In kasta oo sirta VPN ay ku dari karto dhowr millise seconds oo daahitaan ah, lama ogaan karo ilaa aad tahay cayaaryahan xirfadle ah ama streamer ah heerka ugu sarreeya mooyaane.
Xaaladaha qaarkood, adeegsiga VPN waxay xitaa dedejin kartaa xidhiidhkaaga. Badiyaa bixiyayaasha waaweyni waxay adeegsadaan shabakadaha xarumaha xogta ee aduunka. Markaa haddii goobta aysan isticmaalin CDN, ama xarunta xogta CDN ee kuugu dhow ay fog tahay, xiriirka VPN ayaa laga yaabaa inuu dhakhso badan yahay.
3 VPNs Premium ah oo Sugan Waxaad Maanta Bilaaban Kartaa Isticmaalka Baadhitaanka Badbaadada ah (iyo Hal ikhtiyaar oo bilaash ah)
Si aad u qaadato amniga xogtaada si dhab ah, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah xalalkan VPN si aad u bilowdo baadhashada badbaado leh maanta.
La halgamaya wakhtiga dhimista iyo arrimaha WordPress? Behmaster waa xalka martigelinta loogu talagalay iyadoo maskaxda lagu hayo waxqabadka iyo amniga! Eeg qorshayaashayada
ExpressVPN VPN adeeg
Haddii aad dhegeysato podcasts ama aad daawato mid ka mid ah YouTubers-yada waaweyn, fursadaha waxaad horay u maqashay ExpressVPN.
Waa mid ka mid ah adeeg bixiyayaasha VPN ee ugu wayn caalamka, iyo hubaal ahaan, kan ugu xayaysiis badan. Laakiin kaliya maaha dollar xayeysiis in ExpressVPN u socdo. Miisaaniyadeeda ballaaran iyo saldhigga macaamiisha waxay sidoo kale ka dhigan tahay inay leedahay wax-soo-saar adag oo leh in ka badan 3,000 VPN server.
ExpressVPN ma xaddidayso xawaaradahaaga xawliga ah, adeegayaasha degdega ahina waxay la macno yihiin inaad arki karto xawaarahooda la soo degista oo dhan ilaa 50 Mbps ama ka sareeya, taas oo ku xidhan xidhiidhkaaga internetka iyo goobtaada.
ExpressVPN waxay ku kacaysaa $12.95/bishii bishii la soo dallaco, iyo $8.32 bishiiba sannad kasta.
Xawaaraha isku xirka: 50 Mbps+
Xayeysiin qiimeyn: 4.7 ka mid ah 5, oo leh 6,100+ dib u eegis
Xadka qalabka: Ilaa 5 qalab
Price: $ 12.95 / bishii
Maxkamad lacag la'aan ah: None
NordVPN VPN adeeg
NordVPN waa hogaamiye kale oo suuq ah oo ku yaal booska VPN oo leh sabab wanaagsan.
NordVPN waxay si isdaba joog ah u tijaabisay inay tahay VPN-ka ugu dhaqsaha badan ee ay heli karaan isticmaalayaasha Mareykanka waxayna leedahay in ka badan 5,000 oo adeegayaal 60+ wadamo kala duwan ah.
Waxay inta badan bixisaa iibka weyn ee qorshayaasha sanadlaha ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah adeegyada VPN ka jaban ee suuqa. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaad haysataa heshiisyada Jimcaha Madoow / Cyber ​​Isniinta xilliyeedka (haddii aad maamusho ecommerce, iska hubi inaad ka hubiso webinar-kayaga wakaaladda WooCommerce Sau/Cal mowduuca).
NordVPN waxa kale oo ay bixisaa dammaanad lacageed oo 30 maalmood ah.
Trustpilot qiimeynta: 4.4 ka mid ah 5, oo leh 4,955+ dib u eegis
Price: $ 11.95 / bishii
Xadka qalabka: Ilaa 6 qalab
Maxkamad lacag la'aan ah: Haa
Adeegga Surfshark VPN
Surfshark waa adeeg kale oo weyn oo VPN ah kaas oo ku faanaya xiriir degdeg ah oo la isku halayn karo, iyadoo aan loo eegin meesha aad ka joogto adduunka.
SurfShark waxay leedahay in ka badan 1,700 goobood oo server ah in ka badan 63 wadan oo kala duwan. Bandwidth iyo qalabyadu kuma xadidna hal qorshe, kaas oo ah wax aan caadi ahayn bixiyayaasha VPN. Xalkan VPN wuxuu sidoo kale la socdaa muuqaal xannibaadaha xayeysiiska ah.
Marka la joogo $12.95 euro bishii, qiimuhu waxa uu la mid yahay ka ExpressVPN.
Xawaaraha isku xirka: 40 Mbps+
Trustpilot qiimeynta: 4.3 ka mid ah 5, oo leh 6,410+ dib u eegis
Price: $12.95/bishii (heshiisyo gaar ah ayaa sannad walba socda oo loogu talagalay dhacdooyinka xilliyeedka sida Black Friday / Cyber ​​Monday)
Xadka qalabka: None
Ikhtiyaarka bilaashka ah: ProtonVPN
ProtonVPN adeeg VPN bilaash ah
ProtonVPN waxa ay bixisaa 100% bilaash ah iyo qorshe bilaa xayeysiis ah kaas oo taageera hal qalab iyo ilaa saddex wadan.
Qorshaha bilaashka ah wuxuu sidoo kale ilaalinayaa sirtaada, iyadoo leh siyaasad lagu ilaalinayo 0 diiwaanka hawl kasta oo isticmaale iyo baadhid.
Bandwidth iyo xawaaruhu farsamo ahaan waa kuwo aan xadidnayn, laakiin maadaama aad isticmaalayso adeegayaal badan oo bilaash ah, xawaaruhu marka la barbardhigo waa gaabis.
Qorshaha khidmadaha waxaa ku jira 1,077 adeegayaal 50 waddan ah, laakiin isticmaaleyaasha qaarkood waxay soo sheegaan xawaare gaabis ah meelaha caanka ah iyo adeegayaasha sida Mareykanka.
Sumcada macaamiishu uma wanaagsana sida saddexda doorasho ee aan kor ku soo sheegnay.
Xawaaraha isku xirka: 20 Mbps+ (qorshe bilaash ah)
Bandwidth: Aan xad lahayn (qorshe bilaash ah)
Trustpilot qiimeynta: 3.0 ka mid ah 5, oo leh 54 faallooyin
Price: Qorshe bilaash ah. Laga bilaabo $4/bishii
Xadka qalabka: 1 qalab ee qorshaha bilaashka ah
Wakiil vs VPN: FAQs
Ma u baahan tahay wakiil haddii aad leedahay VPN?
Maya, uma baahnid server wakiil ah haddii aad hadda isticmaaleyso VPN. VPN-ku waxa uu mar horeba qarinayaa ciwaanka IP-ga ee adeegayaasha aad gasho. Sidoo kale, waxa ay siraysaa xogta oo ay ka qarisaa ISP-gaaga iyo kuwa dhici kara.
Ma wada isticmaali karaa VPN iyo wakiil?
Haa, farsamo ahaan, waa suurtogal in labadaba la isticmaalo isku mar. Laakin looma baahna mana yeelan doonto wax saameyn ah oo la taaban karo amnigaaga. Taa beddelkeeda, waxay u badan tahay inay si weyn u dhimi doonto xidhiidhkaaga, kordhiso daahitaanka, oo ay burburiso khibradaada wax raadinta.
Ma la raadin karaa wakiillada?
Adeegaha wakiilku wuxuu ka qarin doonaa cinwaankaaga IP-ga boggaga internetka iyo adeegyada aad booqato. Qof ayaa laga yaabaa inuu weli ku garto kumbuyuutarkaaga ama qalabkaaga faraha, laakiin taasi lama xiriirto wakiilka.
Wakiilku ma qariyaa IP gaaga?
Haa, labadaba wakiillada iyo VPN-yaduba waxay ka qariyaan ciwaanka IP-gaaga mareegaha iyo adeegyada aad booqato oo aad isticmaasho.
Ma jiraan Server-yada wakiillada ee bilaashka ah?
Waxa jira kumanaan wakiil oo bilaash ah oo laga heli karo onlayn, laakiin qaar badan ayaa ammaan ah, gaabis ah, ama aan la isku halayn karin.
Miyaan Isticmaalaa Adeegaha Wakiil Bilaash ah?
Haddii aad daryeesho xawaaraha, isku hallaynta, iyo amniga ku xidhidhiyahaaga, wakiilka bilaashka ah maaha doorashada saxda ah. Taa beddelkeeda, dooro adeegga VPN ee qaaliga ah ama wakiil.
Haddii aad rabto inaad gasho macluumaadka xaddidan juqraafiyeed, markaas waxaa ku filnaan kara adeegaha wakiillada ee bilaashka ah.
Marka ay timaado inaad naftaada ku ilaaliso badbaadada iyo amniga khadka, wakiillada iyo VPN-yadu waa laba kelmadood oo aad wax badan maqashid - laakiin waa maxay faraqa u dhexeeya? 🔐 Hagahan waxa uu si qoto dheer u gelinayaa walaacyada gaarka ah ee labada xal.Riix halkan Tweet
Marka ay timaado amniga iyo sirnimada, serverka wakiil ka ah dadweynaha kuma dhigna qiimo qaali ah, VPN qarsoodi ah. VPN-ku wuxuu ku kacayaa xoogaa lacag ah, hubaal, laakiin waxay taas ka dhigaysaa isku halaynta, amniga, sirta, iyo xawaaraha isku xidhka.
Sugitaanka taraafikadaada mareegaha maaha oo kaliya arin gelitaanka macluumaadka juqraafi-xidhan. Waxa kale oo ay yeelan kartaa carqalado qoto dheer oo ku yimaada xorriyadda ururinta ama wadaaga macluumaadka aan laga heli karin qof waddankiisa.
Miyaad isticmaashaa VPN si aad u horumariso qarsoodigaaga iyo amnigaaga markaad baadhayso internetka? Waa maxay waayo-aragnimadaada?
Sida loo hagaajiyo arrimaha rakibaadda macOS Big Sur ee MacBook Pro ka weyn